merolagani - नेप्से स्थिर,कारोबार रकममा सामान्य गिरावट
नेप्से स्थिर,कारोबार रकममा सामान्य गिरावट
अघिल्ला दुई दिन लगातार दोहोरो अंकले बढेको सेयरबजार बुधबार स्थिर देखिएको छ । कारोबारमा आएका अधिकांस समूह सकारात्मक रहेपछि बजार स्थिर रहेको हो । बजार स्थिर रहेपनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ ।
बजार खुल्नासाथ उकालो लागेको नेप्से अढाई घण्टाको कारोबार पश्चात नकरात्मक देखिन थालेको हो । बुधबार नेप्से शुन्य दशमलव तीन नौ अंकले घटेर १४७६.५१ अंकमा पुगेको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम भने करिब एक करोडले घटेको छ । यसदिन सेयरबजारमा १२० कम्पनीको ३६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयरकिनबेच भएको छ ।
बुधबारको कारोबारमा वाणिज्य बैंक, होटल, वित्त र अन्य समूह सकरात्मक रहेपनि बजार बढ्न सकेन । यसदिन विमा, विकास बैंक तथा जलविद्युत समूहका सूचक नकारात्मक रहे । सबैभन्दा धेरै विमा समूहको सूचक ५० अंकले घटेको छ ।
यसदिन सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने नबिल ब्यालेन्स फण्ड एककोे ४ करोड ७४ लाख बराबरको सेयर किनबेच भयो । नेपाल लाइफले २ करोड ३६ लाख तथा एभरेष्ट बैंकले २ करोड ३३ लाख बराबरको कारोबार गर्दा अन्य कुनै पनि कम्पनीको कारोबार रकम दुई करोड नाघ्न सकेन ।
यसदिन सहयोगी विकास बैंकका लगनाीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाए । यो कम्पनीको सेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै दश प्रतिशतका दरले बढेको छ । सहारा विकास बैंकसँगको मर्जर भाँडिएपछि आजैबाट सहयोगीको नेप्सेमा कारोबार खुलेको हो ।
यता कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य भने लगात्तार तीनदेखि झण्डै दश प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।जेबिल्स फाइनान्स, राष्ट्रिय विमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स तथा नागरिक लगानीककोषका लगानीकर्ता पनि धेरै कमाउनेमा परे ।
बर्षदिनमा नेप्सेको इतिहास फेरि दोहोरिएला ? यस्तो छ चित्र कथा
नयाँ बर्ष लागे यता सेयरबजार निरन्तर बढेको छ । नेप्से सूचक मात्र होईन कारोबार रकमले समेत बजारलाई साथ दिदै आएको छ । लगातार दोहोरो अंकले बजार बढ्दा उत्साह त थपिएको छ नै भोलिका दिनमा बजार के होला भन्ने कौतुहल्ता पनि लगानीकर्तामा उत्तिकै देखिन्छ ।
ब्याजबाटै ९ अर्ब आम्दानी गर्दा पनि एनआईसिएको बढेन नाफा, इपिएस कति ?
कालिका पावर कम्पनीको १२ लाख कित्ता आईपिओ आउने
पूर्ण अनलाईन कारोबारको तयारी अन्तिम चरणमा,शुक्रबार डेमो सार्वजनिक गरिने
सेयर बजारमा एकैदिन थपियो ६ अर्ब ३६ करोडको सेयर